टी–२० सिरिजः हङकङविरुद्ध मलेसियाको शानदार जित – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः मलेसियासँगको टी–२० क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि हङकङ ३५ रनले पराजित भएको छ । आज मलेसियाले दिएको १ सय ३९ रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङले निर्धारित ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ३ रन मात्र बनाउन सक्याे ।
उसका लागि वाकास बराकातले ३५, इजाज खानले अविजित ३१ र हमीद खानले १० रन बनाए । अन्य खेलाडीले भने दोहोरो अंकमा समेत रन बनाउन सकेनन् । बलिङमा मलेसिया टीमका वीरन्दीप सिंह, फित्री सामले ३–३ र स्याजारुल इद्रसले २ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको घरेलु टोली मलेसियाले वर्षाका कारण १९ ओभरमा झारिएको खेलमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ३८ रन बनायो । उसका लागि विरन्दीप सिंहले ४६, कप्तान अहमद फैज, सायद इजाजले २१–२१ र शार्विन मुनिआन्डीले अविजित १६ रन बनाए । अन्य खेलाडीले भने दोहोरो अंकमासमेत रन बनाउन सकेनन् ।
बलिङमा हङकङ टीमका अफ्ताब हुसैन, अजैज खानले २–२ र वकास बराकातले एक विकेट लिए । आजो जितसँगै पाँच खेलमा सिरिजमा मलेसियाले २–० को अग्रता बनाएको छ । उसले पहिलो म्याचमा हङकङलाई २१ रनले हराएको थियो ।
इस्टर्न रिजन कप फेब्रुअरी २९ देखि मार्च ७ सम्म थाईल्याण्डमा सुरु हुँदैछ । यो प्रतियोगितामा इस्टर्नबाट मलेसिया, हङकङसहित नेपाल सिंगापुर, थाइल्याण्डले पनि सहभागिता जनाउने भएका छन् । चीन, म्यानमार र भुटानले भने कोरोना भाइरसका कारण यो प्रतियोगिता नखेल्ने भएका छन् ।
नयाँ खेल तालिका अनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा २९ फेब्रुअरीमा मलेसियासँग खेल्ने छ । त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा १ मार्चमा हङकङसँग, तेस्रो खेलमा ४ मार्चमा थाईल्याण्ड र अन्तिम खेलमा ६ मार्चमा सिंगापुरसँग खेल्ने छ । प्रतियोगिताको शिर्ष २ टीम एसिया कप छनोटमा प्रवेश गर्ने छन् । तीन टीमले सहभागीता नजाउने भए पनि खेल राउन्ड रोबिनमा हुने भएको छ ।
ट्याग्स: टी-२० क्रिकेट सिरिज, हङकङविरुद्ध मलेसिया
सातवटै प्रदेशमा कोरोना परीक्षण शुरु
निगमको जहाज आज अष्ट्रेलिया उड्दै
खाद्यान्न लिएर टोलटोलमा पुग्यो साल्ट ट्रेडिङको भ्यान
संकटको घडीमा स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो दायित्वबाट पछि नहटौंः डा. भगवान कोइराला
क्वारेन्टाइन कि खोर ?
कनिका कपूरको पाँचौ रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’
कामदारको स्वदेश फर्कने अधिकार नखोस्न नेपाललाई अपिल